पुरुषहरूले गुगलमा के-के खोज्छन ? पत्ता लाग्यो यस्तो अनौठो तथ्य — Sanchar Kendra
यौ’नां’गको उत्तेजना- पुरुषहरु आफ्नो यौ’निकता तथा यौ’न क्षमताको विषयलाई लिएर निकै सोँचमग्न तथा चिन्तित हुन्छन् । उक्त अध्ययनका क्रममा गुगल सर्चमा धेरै पुरुषहरुले लिंगमा उत्तेजना कम हुनुका कारणका विषयमा अत्यधिक खोजी गर्ने गरेको पाइएको छ । कमजोर उत्तेजना नपुंशकताको संकेत हो कि होइन ? भन्ने प्रश्नको जवाफ पुरुषहरुले गुगल सर्चमा निकै खोज्ने गरेका छन् ।
दाह्रीको चिन्ता- पुरुषहरु आफ्नो स्वास्थ्यका साथसाथै आफ्नो पुरुषसत्व देखाउने दाह्रीप्रति पनि निकै संवेदनशील र चिन्तित हुने गरेको पाइएको छ । के दाह्री खौरिँदा अर्थात् सेभिङ गर्नाले अनुहारमा बढि रौं पलाउँछन् ? भन्ने प्रश्नको जवाफ गुगल सर्चमा अत्यधिक खोजी गर्ने गरेको पाइएको छ । यो विषयको खोजी गर्ने पुरुषको संख्या ६८ हजार ४ सय थियो ।
स्तन क्यान्सर- महिलाहरुमा स्तन क्यान्सर आम समस्याको रुपमा रहेको छ । तर आफ्नो स्वास्थ्यलाई लिएर सचेत रहेका धेरै पुरुषहरुले आफुलाई पनि स्तन क्यान्सर हुन सक्दछ वा सक्दैन भन्ने कुरा जान्न चाहन्छन् । गुगल सर्चमा पुरुषहरुले पुरुष स्तन क्यान्सरको बारेमा पनि अत्यधिक खोजी गरेको पाइएको छ ।
स्मरण रहोस् पुरुषमा हुने स्तन क्यान्सर अरु क्यान्सरको तुलनामा निकै फरक छ । ६० वर्षमाथिका केही पुरुषहरुमा यो समस्या देखिने गरेको छ । कूल ६१ हजार २ सय जनाले गुगल सर्चमा यस विषयमा खोजी गरेको अध्ययनका क्रममा पाइयो ।
कपाल कसरी झर्दछ ?
पुरुषहरुले गुगल सर्चमा अत्यधिक खोजी गर्ने केही विषयहरु निकै रोचक पनि छन् । पुरुषहरु जान्न चाहन्छन् कि के चुल्ठी बाट्नाले वा टोपी लगाउनाले कपाल झर्न सक्दछ ? कपालको चिन्ता गरेर गुगलको सहारा लिनेहरु ५२ हजार २ सय जना थिए ।
व्यायाम र प्रोटिन : कतिपय पुरुषहरु आफ्नो फिटनेसलाई लिएर निकै चिन्तित हुन्छन् । उनीहरु व्यायाम गरे लगत्तै प्रोटिनयुक्त खानेकुरा खानु पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा जान्न चाहन्छन् । यदि प्रोटिन खानुपर्दछ भने कस्तो प्रोटिन खाने ? भन्ने कुरा पनि उनीहरुले गुगलमा सर्च गरिरहेका हुन्छन् । अध्ययनका क्रममा ५१ हजार जना पुरुषले उल्लेखित सवालको जवाफ गुगलमा खोज्ने प्रयत्न गरेका छन्